သရဲနီတိုက်စစ်မှူးမှဝံပုလွေဝါတွေကိုအိုးထရက်ဖို့စ်မှာအသေသတ်ခဲ့တဲ့ပွဲပြီးသုံးသပ်ချက်များ – FBV SPORT NEWS
သရဲနီတိုက်စစ်မှူးမှ ဝံပုလွေဝါတွေကို အိုးထရက်ဖို့စ်မှာ အသေသတ်ခဲ့တဲ့ပွဲပြီးသုံးသပ်ချက်များ
မန်ချက်စတာယူနိက်တက်ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ် (၁၅) အပြီးမှာ အိုးထရက်ဖို့စ်မှာ ဝုဗ်အသင်းကို ရတ်ဖို့စ်ရဲ့နောက်ကျအနိုင်ဂိုးနဲ့ ၃မိနစ်မန်ယူဆိုသော ဂုဏ်ပုဒ်ကိုထိမ်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပြီး အမှတ်ပေး ဇယားအဆင့် ၂ နေရာသို့ခုန်တက်သွားခဲ့ပါပြီ…
ပထမပိုင်းမှာ ယာမန်ယူအသင်းဟာ ပွဲထွကိကစားသမားနေရာထိအပြောင်းအလဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပွဲထွကိလာခဲ့ပါတယ်. ..အများမျှော်လင့်ထားတဲ့ တိုက်စစ်မှူးကာဗာနီပွဲထွကိလာပေမယ့် ပွဲပန်းနေတဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားတွေနဲ့ ဝုဒ်အသင်းရဲ့ကွင်းလယိက ဖြတ်တောက်ကစားပုံတွေကြောင့်မန်ယူအသင်း ပထမပိုင်းမှာ ဖိကစား နိုင်ပေမယ် သေချာပေါက်အခွငိ့အရေးဖန်တီးနိုင်မှုမှာ ဝုဗ်အသင်းက အသာရခဲ့ပါတယ်။
မန်ယူအသင်းဂိုးသမား ဒီဂီယာလက်စွမ်းပြကာကွယ်မှုတွေပြုလုပ် ခဲ့လို့သာပထမပိုင်းမှာ ဦးဆောင်ဂိုးမပေးခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး ဝုဗ်အသင်းရဲ ကန်သွင်းမှုလေးကြိမ်ကို ကာကွယ်ပေးခဲ့ ပြီးသူ့ရဲ့နံပါတ်၁ နေရာအတွက် ထိုက်တန်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့ ပါတယ်။
ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ မန်ချက်စတာယူနိက်ဟာ ခြေစွမ်းအသာနဲ့ တိုက်စစ်ပိုင်းအနည်းငယ်ကောင်းမွန်လာခဲ့ပါတယ်….မာရှယ်နဲ့ ဂရင်းဝုဒ်ကိုလဲပြီး နောက် လုရှောဘက်ခြမ်းကနေ ပြိုင်ဘက်နောက်တန်းကိုဖိအားပေးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်….
ပေါ့ဘာနဲ့ ဘရူနိုဖာနန်ဒက် ရဲ့ Magic Passing တွေ အမြင့်ဘောတွေ ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ ဝုဗ်နောက်တန်းကြောင့် တိုက်စစ်မှူးကြီး ကာဗာနီ လုပ်ရှားခွင့်မသာခဲ့ပါဘူး…..လက်ထိဘောတွေကို ရခဲ့ပေမယ့် ယနေ့မှာတော့ ယူနိုက်တက်ကို ကွင်းလယ်ဒိုင်လူကြီး က ပထမပိုင်းထဲက မျက်ကွယ်ပြုခဲ့ပါတယ်….
ရသင့်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်ဘော ပင်နယ်တီအခွင့်အရေးများစွာကို ကွင်းလယ်ဒိုင်လူကြီးက ဖြုန်းတီးပစ်ခဲ့တာမို့ ယူနိက်တက်အတွက် ဒီပွဲ မှာ ဂိုးမပြတ်ခဲ့တာလို့ပြောလို့ရပါတယ်..ရရှိတဲ့အခွင့်အရေးများကို အသုံးချသွားနိုင်မယ်ဆိုရင် ၄-၀ လောက်ထိ ဖြစ်သွားနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲပါ…
ပွဲပြီးခါန်ီးမိနစ် ၈၀ကျော်မှာ ယူနိက်တက် တိုက်စစ်ဟာ အရှိန်မြင့်လာပြီး တောက်လျောက် ဝုဗ်အသင်းကို ဖိအားပေးပါတော့တယ်…မာရှယ်နဲ့ပေါ့ဘာကောင်တာတွဲလုံးတွေ ကနေ လည်းအဆုံးသတ်အားနည်းလို့ ဂိုးမရရှိခဲပါဘူး…..တလုံးတည်းသော အနိုင်ဂိုးကိုတော့နာကျင်အချိန်ပို ၄မိနစ်မှာ ရတ်ဖို့ တကိုယ်တော်စွမ်းရည်ဖြင့် လှလှပပ ကန်သွင်းယူသွားခဲ့တာဘဲဖြစ်ပါတယ်…